China Flange Manufacturer na Supplier | Akpụkpọ anụ
Flange bụ usoro nke ijikọ ọkpọkọ, valvụ, nfuli na akụrụngwa ndị ọzọ iji mepụta usoro ọkpọkọ. Ọ na-enyekwa ohere dị mfe maka nhicha, nyocha ma ọ bụ mgbanwe. A na-ejikarị flanges arụ ọrụ ma ọ bụ kpụọ ya n'ime usoro ndị dị otú ahụ wee soro ya na bolts.
Flanges - Ozi Izugbe
Flange a ka a na-agbanye gburugburu na sistemụ n'olu ya nke pụtara na iguzosi ike n'ezi ihe nke ebe a na-agbanye mgbatị nwere ike nyochaa site na redio. Ihe na-agwụ ike nke ọkpọkọ na flange egwuregwu, nke na-ebelata ọgba aghara na mbuze n'ime pipeline. Ya mere, a na-akwado weld weld na ngwa ndị dị oke egwu
Nke a na-amị amị na ọkpọkọ na mgbe ahụ fillet welded.Slip-na flanges ndị dị mfe iji na chepụtara ngwa.
A na - eji flange a kpochapụ pipeline, valves na nfuli, enwere ike iji ya dị ka mkpuchi nyocha. A na-akpọ ya mgbe ụfọdụ dị ka ihe na-adịghị ọcha.
Nke a Flange bụ orednọ nkịtị gwụrụ na-anabata ọkpọkọ tupu fillet welded. Mụụrụ nke pipe na Flange bụ ma thesame Ya mere na-enye goodflow e ji mara.
A na-ezo aka na flange a dị ka eri ma ọ bụ kposara. A na-eji ya iji jikọta ihe ndị ọzọ ejiri eri na obere nrụgide, ngwa ndị na-adịghị mkpa. Enweghị ịgbado ọkụ.
A na-eji flanges ndị a eme ihe mgbe niile na njedebe njedebe nke a na-agbanye mgbatị na ọkpọkọ ahụ na flange na-esote ya. Nke a pụtara na ngwụcha ngwụcha na-eme ihu. A kwadoro nkwonkwo ụkwụ na ngwa nrụgide dị ala n'ihi na ọ na-adị mfe ịgbakọta ma kwekọọ. Iji belata ọnụahịa ndị a nwere ike ịnye ha na-enweghị ebe obibi na / ma ọ bụ na-emeso ya, na-ekpuchi carbon nchara.
Mgbaaka Jodị Nkwonkwo
Nke a bụ usoro iji hụ na njikọ njikọta flange na nnukwu nrụgide. A na-etinye mgbanaka ọla edo n'ime ọkpọ hexagonal na ihu nke flange iji mee akara ahụ. Enwere ike iji usoro njikọ a na Weld Neck, Slip-on and Blind Flanges.
Ọkọlọtọ ANSI ANSIB16.5, ASMEB16.47seriesA (MSS-SP-44), ASME
B16.47, usoroB (API605)
DIN NONHI-OBI-OWU-E + E +234-E
BS BS4504, BS10KWDD / E
Ihe onwunwe ANSI CSA105 / A105NA350LF2ss304 / 304L, 316 / 316L
Nrụgide ANSI Klas150,300,400,600,900,1500,2500lbs
Nha ANSI 1/2 * -120 "
Mkpuchi mgbochi rustoil, varnish, yellowpaint, blackpaint, galvanizingetc
uzuoku, ikuku, gasandoil
Ngwugwu Plywoodcases / pallets
Nke gara aga: High Quality Carbon Steel Weld Caps
Osote: Hot tinye kpaliri achọkarị ịna Iron Pipe Dabara Adaba n'ichepụta beaded